Zviratidzo zvekutanga zvechando
Apo inotonhora inouya, vanhu vazhinji havagoni kudzivisa kutonhora. Zvisinei, kana iwe ukaona zviratidzo zvekutanga zvechando munguva, unogona kudzivirira kupisa kukuru uye kupararira kwehutachiona.
Kusiyana nefuruwenza, iyo inotanga pakarepo nefivha yakakwirira, inotonhora inogona kutanga kuratidza sediki shoma uye nheyo dzomunharaunda mune nasopharynx. Sezvo chirwere chechirwere chinokura, zviratidzo zve laryngitis, rhinitis, tracheobronchitis, uye pharyngitis inozoonekwa. Reflex tachycardia inogona kukura, kurasikirwa nenzara, kushungurudza uye kurutsa. Muzviitiko zvinogona kuonekwa kuora, chills uye aches muzvibatanidza.
Usati wasarudza maitiro ekurapa zviratidzo zvekutanga zvechando, zvakakosha kuve nechokwadi kuti zviratidzo zvinowonekwa zviri kutonhora, uye kwete zvimwe zvirwere zvakakomba. Pane zviratidzo zvekutanga zvekutonhora:
kuwedzera kuduku kwekushisa (kazhinji kazhinji kusvika kusvika 38 degrees);
aches muzvinyorwa uye musuru;
conjunctivitis (dzimwe nguva);
Kana, mushure mokuwana zviratidzo izvi zvehutumbi mumuviri wako, pakarepo tora matanho akakodzera, iwe unokwanisa kukurumidza kubvisa kutanga kwekuvhiringidza uye kudzivisa migumisiro yakaipa yakawanda yehuwandu hwehutano. Kana iwe usingateereri zviratidzo zvekutonhora uye edza kuzvidzosera pasina kushandura mune mararamiro, izvozvi, pangozi yezvinetso.
Zviito zvekutanga zvehozi
Kuziva kuti ndeupi zviratidzo zvekutanga kunotonhora, unogona kumisa kupararira kwechirwere uye kubvisa zvachose chirwere chacho. Nekutanga zviratidzo zvekurwara uye kupisa, iwe unogona kutora ascorbic acid, musanganiswa wemononi, garlic uye uchi kuti uwedzere muviri wechirwere. Kusungirirwa ne decoction yeStor John's wort kana sage inoshandawo. Kana iri fodya yakawanda, nzira yakanakisisa yekudiridza yemvura yakasviba ine saline solution.
Inhalation inoshanda. Vanobatsira kubvisa kupisa kubva pamapfupa ekufema nokukurumidza sezvinobvira, kubvisa marwadzo mumutsipa uye kumusana kwemazamu. Inhalation inogona kuve yakakosha pamafuta anokosha (tsanga), mbatata yakabikwa kana mishonga yemiti (calendula, eucalyptus, oak bark, chamomile). Zvakanakisisa kuzvipedza usati warara.
Nzira yekudzorera sei mumukanana microflora mushure mekutora antibiotics?
Atopic dermatitis - zviratidzo
Matafura ekuvandudza utachiona
Molluscum contagiosum - kurapa
Lumbar radiculitis - zviratidzo uye mishonga
Marudzi e edema
Phlegmon - kurapwa
Donhwe reziso re iodide ye potassium
Chidimbu chendangariro yakasimba - kurapwa kumba
Ketorol - zvakafanana
Nzira yekuverenga mari yekubhadhara vana?
Mwana wacho ane mukaka wakakwana wemukaka here?
Mukadzi mutsvuku pantsuit
Point massage yekureruka kwekukura
Mhemberero dzechichato chepakati-bvudzi - ndiyo yakanakisisa yakagadzirirwa yemuchato mune michina yakasiyana
Kudyisa ma kittens
Kugadzirwa kwe veranda muimba yega
Kugadzirira gastric vaginal drainage
Zviratidzo zvekutanga kwebasa mukubereka
Salo, munyu munzira yakaoma
Jam kubva peaches
Vakadzi shangu - fashoni 2016
Nzira yekuunganidza sei mercury kubva pamatepi?
Chiroto chomuchato ne corset
Pulmonary hypertension - zviratidzo
Zviratidzo zveMastitis muamai vanoyamwisa
Biography yaMariah Carey
Janet Jackson ari kupedza Krisimasi mazororo nemunhu asingazivikanwi